မူးလာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ အရက်သမား ပုံစံ ၁၀ မျိုး (အမူးသမား၁၀မျိုး)
in Funny, General Knowledge, Lotaya
အရက်တွေဘီယာတွေ သောက်ပြီးသွားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို သတိထားမိကြလား? တချို့ကျတော့မသောက်ခင်က အငြိမ် သောက်ပီးရင်တော့ သူ့လောက်ပျော်တတ်တာ စကားများတာ မရှိတော့ဘူး။ တချို့ကျတော့ သဘေ ာကောင်းစိတ်ကောင်းရှိတယ် မသောက်ခင်က မူးပီလည်းဆိုရော စူပါမန်းလိုလို ပါဝါရိန်းဂျားလိုလိုဖြစ်သွားတတ်ရော..ဒါကြောင့် မူးလာရင် လူတွေဖြစ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့် ၁၀ မျိုးအကြောင်း ကိုရေးသားပေးလိုက်တာပါ။ တခုရှိတာက ကိုယ်က ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မူးမူး ကျင့်ယူလို့ရပါတယ်နော်။ ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့။ကဲ..အမူးသမား ၁၀မျိုးအကြောင်းကို အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရအာင်..
ဒီလိုအမူးသမားတွေကျတော့ မူးလာပီဟေ့ဆိုရင် Jokerလိုမူးတော့တာ ဟာသတွေပြောမယ်၊ စမယ်နောက်မယ် ပျော်မယ် ရွှင်မယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ခေါင်းထဲရှိတော့တယ်။သူတို့က ဘာပြောပြောရယ်မောကြပြီး အခွင့်အရေးများရရင်တော့ ခုန်ပေါက်ပြီးတော့ကပါလိမ့်မယ်။ အဲပြီးရင်တော့ ကြီးတောင့်ကြီးကျယ်စကားတွေပြောပါလိမ့်မယ်။ KTVသွားမယ် မာဆတ်သွားမယ်တို့ဆိုတာတွေလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့က သောက်လို့စားလို့ကောင်းပါတယ်။
ဒီလူစားတွေကျတော့ အရက်တွေအလွန်အကျွံသောက်ပြီးရင် ပလတ်ကျွတ်သွားတတ်တဲ့လူစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါက်ကြောင်သွားတာပေါ့။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ပြောချင်တာတွေလျောက်ပြောမယ် ဆဲရေးတိုင်းထွာမယ် မတရားကြီးထကချင်ကနေမယ် ဥသြတွေဆွဲမယ်.ဘီယာတွေသူ့ပေါ်သူမှောက်ချရင်ချမယ်။ နောက်ဆုံးမူးမှောက်ပီး အိပ်ပျော်သွားမှပဲအေးတော့တယ်
အာ့လိုလူမျိုးနဲ့သောက်မိလို့ကတော့ သူမမူးခင်ထပြေးတာပဲကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ဘာသာပလတ်ကျွတ်ပီးလျောက်လုပ်နေတာနဲ့ သင်ဘာဂျေးထဲအောင်းရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကမမူးရင် ခင်ဖို့ကောင်းသလို အစပိုင်းမှာ တခြားလူတွေကိုပျော်စေပါတယ်။ အဲ..နောက်ပိုင်းကျတော့ အရှက်ရစရာတွေကို လျောက်လုပ်တော့တာပါပဲ။န နံနက်ရောက်ရင် သူ့ဘာသာမမှတ်မိတော့ဘူး
တချို့အရက်သောက်တဲ့သူတွေကျတော့ မူးလာပီဟေ့ဆိုရင် သဘောတွေ ဇွတ်ကောင်းတော့တာမျိုးပါ။ ပထမပိုင်း ပိုက်ဆံမရှိဘူး ဘာညာ ကပ်စေးတွေနဲနေပါလိမ့်မယ်။ ၃ခွက်လောက်ဝင်ပီးရင်တော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ပိုက်ဆံတွေထွက်လာမှန်းမသိဘူး။ ပိုက်ဆံတွေထွက်လာပါလေရော။ အဲ.သူမူးလာပြီဟေ့ဆိုရင် နာရီလေး လှလိုက်တာနော် ခါးပတ်လေးကမိုက်လိုက်တာ တို့ဘာတို့ သွားမပြောနဲ့။ အကုန်ချွတ်ပီးပေးပါလိမ့်မယ်။ အကျီဆိုလည်း ချွတ်ပေးမှာပါပဲ။ သိပ်လည်းပျော်မနေပါနဲ့ဦး.နံနက်ကျရင်တော့ သင့်ဆီက သူမူးပီးပေးထားတာတွေလိုက်ပြန်တောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်မျိုးကျတော့ မူးလာရင် ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုမူတော့တာမျိုးပါ။ သူ့ကိုသူကလေးပေါ့။ တခါတလေများဆို မူးနေရင်းတောင် ကလေးအသံနဲ့ပြောတတ်ပါသေးတယ်။ ကလေးလိုပဲ တအီအီနဲ့ ဂျီကျတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုအရက်သမားကျတော့ တဝိုင်းတည်းထိုင်နေတဲ့သူတွေ ပြောတဲ့စကားမှန်သမျှ အကန်တွေချည်းလျောက်ပြောတတ်တာမျိုးပါ။ တခုခုဆို အကန်ပြောဖို့လောက်ပဲ သိတော့တာပါ။ အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေနဲ့သာထိုင်ရင် ရန်ပွဲတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တအားမူးလာပီဆိုရင်တော့ အကြမ်းဖက်သမားပုံစံပါပေါက်လာတော့တာပါပဲ။ ပီးရင်တေ့ာ ပေါက်ကွဲပီသာမှတ်တော့။ ရန်ဖစ်ချင်သလိုလို အာနိုးလိုလို သိုင်းဆရာလိုလို နဲ့ပြဿနာတွေပဲလှိမ့်ရှာတော့တာ။ အာ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ သောက်ရင် အလယ်ပိုင်းလောက်မရောက်ခင် ထပြန်တာကောင်းပါတယ်။ နို့မို့ဆို သင်ပြန်မယ်ဆိုရင်တောင် ပြန်ခွင့်မရပဲ သူတို့ရစ်သမျှ ထိုင်နားထောင်နေရလိမ့်ပါမယ်.ပြောရရင် သွေးဆိုးတာမျိုးပါ။ သူတို့ကမမူးရင် လုံးဝအကောင်း မူးလာရင်တော့ ပြဿနာတွေတသီကြီးပါလာပီသာမှတ်..
ဒီလူစားတွေကျတော့ မူးလာပီဆိုရင် ဟိုထိ ဒီထိ လိုက်ထိ ရင်ဘတ်တွေထဲ အတင်းခေါင်းနဲ့ဝှေ့လိုဝှေ့ ဟိုကိုင် ဒီကိုင် လျောက်ကိုင်တတ်တဲ့လူစားတွေပါ။ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိ လောက်အောင် မမူးခင်အချိန်နဲ့ကိုကွာသွားတာ။ တွေ့သမျှလူ အကုန်လိုက်ကလိတော့တာ.ဘာကြီးမှန်းကိုမသိဘူး..
ဒီအသောက်သမားတွေကျတော့ တညလုံး အကျီချွတ်ပီးကို သောက်တာ။ နောက်ဆုံးတော်တော်လေး ကောင်းသွားပီဆို ဘောင်းဘီပါမရှိတော့ဘူး။ တွေ့ဖူးလား? မူးလာရင် ချွတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေ..
တယောက်တည်းသောက်တာများတတ်ပါတယ်။ စစချင်းတော့ အငြိမ်သမားတွေလိုပါပဲ။ သူလည်းသူ့ဖီးလ်နဲ့သူ။ သူတို့ကျတော့ တခုခုကိုရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်လို့ မေ့ပစ်နိုင်အောင်လို့ တစိမ့်စိမ့်သောက်ပီး မူးကြတာမျိုးပါ။ မူးသွားရင်မေ့သွားတယ်လေဆိုတာမျိုးပေါ့။
အေးမူးလာပီဆိုရင်တော့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တွေရော စိတ်ကူးယဉ်ထားတာတွေကို အကုန်လျောက်ပြောတတ်ပါတယ်။ အတိ တ်တချိန်က သူဘယ်လောက်ထိချစ်တတ်တဲ့အကြောင်း သူ့ရည်းစားဟောင်းကို ဘယ်လိုပေးဆပ်ခဲ့ကြောင်း စသဖြင့် တောက်လျောက်ပြောတော့တာပါ။ တညလုံး ဒါပဲပြောလိုက် ငိုလိုက် ဝမ်းနည်းလိုက်နဲ့မူးနေတတ်ပါတယ်။ အရက်ငို ငိုတယ်ဆို တာအာ့လိုမျိုးပေါ့။ ပြောပြောပြီးကို ငိုတာ။
ဒီအမူးသမားကသူက အရက်ကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်သောက်တာမျိုး။ ဘာအရက်ဖြစ်ဖြစ်ချတယ်။ ဘော်ဒါတွေနဲ့စုထိုင်ရင် တညလုံး သူက သူ့ဘော်ဒါ အရက်သမားအမျိုးမျိုးကို လိုက်ထိန်းညှိပေးနေတတ်ပါတယ်။
သူကတော့ တခြားအမူးသမားတွေနဲ့ကွဲပြားပါတယ်။ သူတို့က ဘယ်လောက်သောက်သောက် အငြိမ်တွေ။ မူးလို့မူးမှန်းကို မသိတာ။ ဆေးလိပ်လေးဖွာလိုက် စကားပြောတာတွေနားထောင်လိုက် အာ့လို။ သူတို့က သူတို့ဖီးလ်နဲ့သူတို့။ သူတို့က အရက်သောက်ခြင်း အနုပညာကို ကောင်းကောင်းကြီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေပေါ့။
ရေခဲထည့်တာကအစ သူတို့မှာ ပညာတွေရှိပါတယ်.။ အရက်ဂျိုးတွေနဲ့ကွာတာက ဂျိုးတွေက နေ့တိုင်းသောက်တာပဲရှိတာပါ။ သူတို့မှာ အရက်စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေရှိတတ်ပါတယ်။ပြောရရင် ပညာရှင်ဆန်တဲ့အရက်သမားတွေပေ့ါ။ သူတို့ကိုမှီဖို့ များများသောက်ပီး များများလေ့ကျင့်မှပဲရမယ်။ ကဲ..ဒီလောက်ဆို မူးလာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ အရက်သမားပုံစံအမျိုးမျိုးကို သိလောက်ပီထင်ပါတယ်.သင်ရော ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါလဲ?
အရကၼဴးလာရင္ ၾဘင္းခနဲ ေပါလာတဲ့ ပုံစံ ၁၀မ္ိဳး
ဒီလိုအမူးသမားေၾတက္ေတာ့ မူးလာပီေဟ့ဆိုရင္ Jokerလိုမူးေတာ့တာ ဟာေသေၾတ်ပာမယ္၊ စမယ္ေနာကၼယ္ ေပ္ာၼယ္ ႐ႊငၼယၦိဳတာေလာကၸဲ ေခါင္းထဲ႐ြိေတာ့တယ္။သူတို႔က ဘာေ်ပာေ်ပာရယ္ေမာၾကၿပီး အျခင့္ေအရးမ္ားရရင္ေတာ့ ခုႏ္ေပါက္ၿပီးေတာ့ကပါလိမ့္မယ္။ အဲၿပီးရင္ေတာ့ ႀကီးေတာင့္ႀကီးက္ယၥကားေေၾတ်ပာပါလိမ့္မယ္။ KTVၾသားမယ္ မာဆတ္ၾသားမယၱိဳ႕ဆိုတာေၾတလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔နဲ႔က ေသာကႅိဳ႕စားလို႔ေကာင္းပါတယ္။
ဒီလူစားေၾတက္ေတာ့ အရက္ေၾတအၾလႏ္အၾကၽံေသာက္ၿပီးရင္ ပလၾတၠၽတ္ၾသားတတၱဲ့လူစားေၾတပဲ်ဖစၸါတယ္။ ေဂါက္ေၾကာင္ၾသားတာေပါ့။ ဘယႅိဳမ္ိဳးလဲဆိုေတာ့ ေ်ပာခ္ငၱာေေၾတလ္ာက္ေ်ပာမယ္ ဆဲေရးတိုင္းၾထာမယ္ မတရားႀကီးထကခ္ေငၠနမယ္ ဥၾေသၾတႀဆဲမယ္.ဘီယာေၾတသူ႔ေပၚသူေမြာကၡ္ရငၡ္မယ္ အာ့လိုလူမ္ိဳးနဲ႔ေသာကၼိလို႔ေကတာ့ သူမမူးခေငၳ်ပးတာပဲေကာင္းပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ဘာသာပလၾတၠၽတၸီးေလ္ာကႅဳပ္ေနတာနဲ႔ သငာၻေဂ္းထဲေအာင္းရႏိုငၸါတယ္။ ဒီလိုလူမ္ိဳးေၾတကမမူးရင္ ခငၹိဳ႕ေကာင္းသလို အစပိုင္းမြာ တ်ခားလူေၾတကိုေပ္ာ္ေစပါတယ္။ အဲ..ေနာကၸိဳင္းက္ေတာ့ အ႐ြက္ရစရာေၾတကို ေလ္ာကႅဳပ္ေတာ့တာပါပဲ။န နံနက္ေရာက္ရင္ သူ႔ဘာသာမမြတၼိေတာ့ဘူး
တခ္ိဳ႕အရက္ေသာကၱဲ့သူေၾတက္ေတာ့ မူးလာပီေဟ့ဆိုရင္ ေသဘာေၾတ ျဇတ္ေကာင္းေတာ့တာမ္ိဳးပါ။ ပထမပိုင္း ပိုကၦံမ႐ြိဘူး ဘာညာ ကပ္ေစးေၾတနဲေနပါလိမ့္မယ္။ ၃ျခက္ေလာက္ဝငၸီးရင္ေတာ့ ဘေယၠန ဘယႅိဳ ပိုကၦံေၾတၾထကႅာမြႏ္းမသိဘူး။ ပိုကၦံေၾတၾထကႅာပါေေလရာ။ အဲ.သူမူးလာၿပီေဟ့ဆိုရင္ နာရီေလး လြလိုကၱာေနာ္ ခါးပတ္ေလးကမိုကႅိဳကၱာ တို႔ဘာတို႔ ၾသားေမ်ပာနဲ႔။ အကုျႏၡၽတၸီးေပးပါလိမ့္မယ္။ အက္ီဆိုလၫ္း ျခၽတ္ေပးမြာပါပဲ။ သိပႅၫ္းေပ္ာၼေနပါနဲ႔ဦး.နံနကၠ္ရင္ေတာ့ သင့္ဆီက သူမူးပီးေပးထားတာေၾတလိုက္်ပႏ္ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။
ဒီတစၼ္ိဳးက္ေတာ့ မူးလာရင္ ေကလးတစ္ေယာကႅိဳ ်ပဳမူေတာ့တာမ္ိဳးပါ။ သူ႔ကိုသူေကလးေပါ့။ တခါေတလမ္ားဆို မူးေနရင္းေတာင္ ေကလးအသံနဲ႔ေ်ပာတတၸါေသးတယ္။ ေကလးလိုပဲ တအီအီနဲ႔ ဂ္ီက္တတၸါတယ္။
ဒီလိုအရက္သမားက္ေတာ့ တဝိုင္းတၫ္းထိုင္ေနတဲ့သူေၾတ ေ်ပာတဲ့စကားမြႏ္သမြ္ အကႏ္ေၾတခ္ၫ္းေလ္ာက္ေ်ပာတတၱာမ္ိဳးပါ။ တခုခုဆို အကႏ္ေ်ပာဖို႔ေလာကၸဲ သိေတာ့တာပါ။ ေအၾကာင္းမသိတဲ့သူေၾတနဲ႔သာထိုင္ရင္ ရျႏၸဲေတာင္်ဖစၷိုငၸါတယ္။ တကယႅိဳ႕ တအားမူးလာပီဆိုရင္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားပုံစံပါေပါကႅာေတာ့တာပါပဲ။ ပီးရင္ေတ့ာ ေပါၾကၠဲပီသာမြတ္ေတာ့။ ရႏၹစၡ္င္သလိုလို အာႏိုးလိုလို သိုင္းဆရာလိုလို နဲ႔်ပႆနာေၾတပဲလြိမ့္႐ြာေတာ့တာ။ အာ့လိုလူမ္ိဳးေၾတနဲ႔ ေသာက္ရင္ အလယၸိဳင္းေလာေကၼရာကၡင္ ထ်ပႏၲာေကာင္းပါတယ္။ ႏို႔မို႔ဆို သင္်ပႏၼယၦိဳရင္ေတာင္ ်ပျႏၡင့္မရပဲ သူတို႔ရစ္သမြ္ ထိုငၷားေထာင္ေနရလိမ့္ပါမယ္.ေ်ပာရရင္ ေၾသးဆိုးတာမ္ိဳးပါ။ သူတို႔ကမမူးရင္ လုံးဝေအကာင္း မူးလာရင္ေတာ့ ်ပႆနာေၾတတသီႀကီးပါလာပီသာမြတ္..
ဒီလူစားေၾတက္ေတာ့ မူးလာပီဆိုရင္ ဟိုထိ ဒီထိ လိုကၳိ ရငၻတ္ေၾတထဲ အတင္းေခါင္းနဲ႔ေဝြ႔လိုေဝြ႔ ဟိုကိုင္ ဒီကိုင္ ေလ္ာကၠိဳငၱတၱဲ့လူစားေၾတပါ။ ဘာ်ဖစႅိဳ႕်ဖစ္ေနမြႏ္းမသိ ေလာက္ေအာင္ မမူးခင္အခ္ိႏၷဲ႔ကိုၾကာၾသားတာ။ ေၾတ႕သမြ္လူ အကုႏႅိဳကၠလိေတာ့တာ
ဒီေအသာက္သမားေၾတက္ေတာ့ တညလုံး အက္ီျခၽတၸီးကို ေသာကၱာ။ ေနာကၦဳံးေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းၾသားပီဆို ေဘာင္းဘီပါမ႐ြိေတာ့ဘူး။ ေၾတ႕ဖူးလား? မူးလာရင္ ျခၽတၼယၦိဳတဲ့ ေဘာၵါေၾတ..
ေတယာကၱၫ္းေသာကၱာမ္ားတတၸါတယ္။ စစခ္င္းေတာ့ အၿငိမ္သမားေၾတလိုပါပဲ။ သူလၫ္းသူ႔ဖီးလၷဲ႔သူ။ သူတို႔က္ေတာ့ တခုခုကိုရငၦိဳင္ရမြာေၾကာကႅိဳ႕ ေမ့ပစၷိုင္ေအာငႅိဳ႕ တစိမ့္စိမ့္ေသာကၸီး မူးၾကတာမ္ိဳးပါ။ မူးၾသားရင္ေမ့ၾသားတယ္ေလဆိုတာမ္ိဳးေပါ့။ ေအးမူးလာပီဆိုရင္ေတာ့ တကယ့္်ဖစ္ရပၼြႏ္ေေၾတရာ စိတၠဴးယၪၳားတာေၾတကို အကုႏ္ေလ္ာက္ေ်ပာတတၸါတယ္။ အတိတၱခ္ိႏၠ သူဘယ္ေလာကၳိခ္စၱတၱဲ့ေအၾကာင္း သူ႔ရၫ္းစားေဟာင္းကို ဘယႅိဳေပးဆပၡဲ့ေၾကာင္း စသ်ဖင့္ ေတာက္ေလ္ာက္ေ်ပာေတာ့တာပါ။ တညလုံး ဒါပဲေ်ပာလိုက္ ငိုလိုက္ ဝမ္းနၫ္းလိုကၷဲ႔မူးေနတတၸါတယ္။ အရက္ငိဳ ငိုတယၦိဳ တာအာ့လိုမ္ိဳးေပါ့။ ေ်ပာေ်ပာၿပီးကို ငိုတာ
ဒီအမူးသမားကသူက အရကၠိဳေန႔တိုင္းပုံမြႏ္ေသာကၱာမ္ိဳး။ ဘာအရက္်ဖစ္်ဖစၡ္တယ္။ ေဘာၵါေၾတနဲ႔စုထိုင္ရင္ တညလုံး သူက သူ႔ေဘာၵါ အရက္သမားအမ္ိဳးမ္ိဳးကို လိုကၳိႏ္းညႇိေပးေနတတၸါတယ္။
သူေကတာ့ တ်ခားအမူးသမားေၾတနဲ႔ႀကဲ်ပားပါတယ္။ သူတို႔က ဘယ္ေလာက္ေသာက္ေသာက္ အၿငိမ္ေၾတ။ မူးလို႔မူးမြႏ္းကို မသိတာ။ ေဆးလိပ္ေလးျဖာလိုက္ စကားေ်ပာတာေၾတနားေထာငႅိဳက္ အာ့လို။ သူတို႔က သူတို႔ဖီးလၷဲ႔သူတို႔။ သူတို႔က အရက္ေသာက္်ခင္း အႏုပညာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးထိႏ္းသိမ္းထားသူေေၾတပါ့။ ေရခဲထၫ့္တာကအစ သူတို႔မြာ ပညာေၾတ႐ြိပါတယ္.။ အရကၢ္ိဳးေၾတနဲ႔ၾကာတာက ဂ္ိဳးေၾတက ေန႔တိုင္းေသာကၱာပဲ႐ြိတာပါ။ သူတို႔မြာ အရကၥၫ္းမ္ၫ္းစၫ္းကမ္းေၾတ႐ြိတတၸါတယ္။ေ်ပာရရင္ ပညာ႐ြငၦႏၲဲ့အရက္သမားေေၾတပ့ါ။ သူတို႔ကိုမြီဖို႔ မ္ားမ္ားေသာကၸီး မ္ားမ္ားေလ့က္င့္မြပဲရမယ္။ ကဲ..ဒီေလာကၦိဳ မူးလာရင္်ဖစၱတၱဲ့ အရက္သမားပုံစံအမ္ိဳးမ္ိဳးကို သိေလာကၸီထငၸါတယ္.သင္ေရာ ဘယ္အမ္ိဳးအစားထဲမြာပါလဲ?